डाक्टरको प्रश्न- तपाईंको मन आज कस्तो छ? :: Setopati
आयास लुइँटेल असोज १
केही समयअघिको घटना हो।
म थानकोटबाट पुरानो बसपार्क चल्ने सार्वजनिक बस चढ्थेँ। कलंकीदेखि कालिमाटीको बाटोमा अक्सर देखिने एकजना मानिस थियो। यो बाटोमा यात्रा गर्ने वा आसपास बस्ने प्रायःजसो मानिसले उसलाई देखेको हुनुपर्छ।
यो रूटमा चल्ने बसको सवारी योगासन गरेजस्तो हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त बसमा यति धेरै मान्छे कोचिन्थ्यो कि कहिल्यै नाम नसुनेको र नगरेको 'गुन्द्रुक आसन' समेत गर्नुपर्थ्यो।
महिलाको आवाज सुनेर बसका सबैजना बाहिर आँखा डुलाउँछन्। म पनि झ्यालको डन्डी समात्दै अघि बढेर अवस्था के रहेछ, बुझ्न खोज्छु। रोकिरहेको बसभित्रबाट बाहिर हेर्दा जिन्दगीमा अहिलेसम्म नदेखेको एउटा दृश्य देखेँ।
कालिमाटी मूल सडकको छेउमा रहेको ढलमाथि एकजना मानिस आफ्नो पाइन्ट र कट्टु खोलेर दिसा गर्दैछ।
दिनदहाडै आफ्नो शरीरको तल्लो भाग उदांग गरेर दिसा गरिरहेको मानिस देख्दा मनमा कस्तो भाव उठ्छ होला? उसलाई देख्ने मानिसहरूको मनमा रिस, घृणा जे-जस्ता भाव उठे पनि ऊ निस्फिक्री थियो। उसको अनुहार भावशून्य!
'यो बहुला जहिल्यै केही न केही उट्पट्याङ गरी नै रहन्छ,' बसचालक उसलाई चिनेझैं गर्दै आफ्नो कुरा राख्छन्।
उनको सिटसँगै बसेको यात्रु थप्छन्, 'यो पागल यस्तै हो। कैले चुरोटको ठुटो चपाउँदै हिँड्छ। कहिले थुकेको पान चाट्दै हिँड्छ। मान्छे त खानदानी परिवारको हो तर 'दिमाग सट' भएपछि यस्तो हालत भयो।'
उनको कुरा वरिपरिका सबैले चाख दिएर सुन्दै छन्।
ट्राफिक लाइटको पहेँलो बत्तीलाई भारतीय स्ट्यान्ड-अप कमेडियन विश्व कल्याणरथ 'फाल्तु र बेकार' को संज्ञा दिन्छन्। पहेँलो बत्तीको अर्थ तयारी अवस्थामा बस भन्ने हो।
विश्व भन्छन्, 'आजको यो दौडादौडको दुनियाँमा को तयारी अवस्थामा छैन र?'
उनी थप्छन्, 'ट्राफिक लाइटबाट पहेँलो बत्ती तुरुन्त हटाऊ सरकार!'
उनले भनेजस्तै हाम्रो वरिपरि हेर्ने हो भने यो हतार-हतार र भागदौडको चरित्र प्रशस्त देख्न पाइन्छ। तर अचम्मको कुरा के भने हामी सबैलाई हतार हुन्छ, तर समयमा कोही पुग्दैन। नेपालीको रगतमा 'समयनिष्ठ जीन' को कमीकै कारणले होला, 'नेपाली ट्याम यस्तै हो' भन्ने जनबोली प्रख्यात रहेको।
हरियो बत्ती बलेर बस अघि बढ्दै गर्दा ढलमाथि दिसा गरिरहेको मानिस उठेर पाइन्टको खीप लगाउँदै थियो। बसभित्रका केही 'भद्र' महिला उसलाई 'मरेस्' भनेर धारे हात लगाउँदै थिए। केही 'सज्जनवृन्द' भने उसको छेउमै पर्ने गरी थुकेर मुख बिगार्दै थिए।
कालिमाटीमा सार्वजनिक रूपमा दिसा गरिरहेको मानिसले मलाई धेरै हदसम्म विचलित बनायो। बुझ्दै जाँदा थाहा पाइयो, ऊ त्यतै आसपास क्षेत्रको एक धनाढ्य परिवारको सदस्य रहेछ। मानसिक अवस्थामा समस्या देखा परेपछि ऊ त्यसरी भौतारिँदै हिँड्न थालेको रहेछ। परिवारले हेरचाह गर्‍यो-गरेन, औषधि मूलो गर्ने प्रयास गर्‍यो-गरेन, यी सबै रहस्यका गर्भमा छन्।
गोदावरीबाट पाटन अस्पताल जँचाउन आएका एकजना बिरामीले भने, 'डाक्टरसाब मलाई डर मात्रै लाग्छ। घरबाट निस्कनै सक्दिनँ। खाली केही न केही नराम्रो हुन्छ भन्ने सोच मात्रै आउँछ। गोदावरीबाट माइक्रो चढेर यहाँ अस्पताल आइपुग्न मलाई सात दिन लाग्यो।'
सात दिन? होइन होला!
दस-एघार किलोमिटर होला पाटन अस्पतालबाट गोदावरी। कसरी लाग्यो सात दिन? विस्तारै हिँड्दै आए पनि डेढ-दुई घन्टामा आइ पुगिन्छ।
अघिदेखि मेरो आँखामा आँखा जुधाउँदै कुरा गरिरहेका बिरामी तल हेर्दै बोल्छन्, 'होइन डाक्टरसाब हरेक पटक जसोतसो गोदावरीको माइक्रो चढ्ने ठाउँसम्म आइपुग्थेँ। तर माइक्रो चढ्न लाग्दा डर लाग्थ्यो। कतै यो माइक्रो पल्टिने त होइन? बाटोमा दुर्घटना हुने त होइन?'
उनी भन्दै गए, 'कुनै दिन लाग्थ्यो, माइक्रोमा बसेका मान्छेले मेरा बारेमा कुरा काट्ने पो हुन् कि? मलाई गिज्याउने पो हुन् कि? यस्तो सोच्दा-सोच्दा डरैडरमा सात दिन बित्यो। आज चाहिँ जे पर्लापर्ला भनेर आँटै गरेर आएँ।'
मानसिक रोग सुन्नासाथ बिरामी झस्किए। अनि डराउँदै सोधे, 'डाक्टरसाब म साइको हुन लागेको त होइन नि?'
होइन, होइन! त्यसरी नबुझ्नुस् न। तपाईंको ज्यान बिरामी परेजस्तै, मन बिरामी पर्न खोजेको हो। एकचोटि जँचाउनुस्, तपाईंलाई सजिलो हुन्छ- मानसिक रोगको ओपिडी जाने पुर्जी लेख्दै मैले बिरामीलाई यी कुरा भनेँ।
'जानै पर्ने हो र डाक्टरसाब? हजुरले नै केही औषधि लेख्न मिल्दैन? त्यता जाँदा फेरि कसैले देख्ला मलाई! झन् समस्या पर्छ,' बिरामीले आग्रह गरे।
'यार मलाई समस्या परिरहेको छ। खासमा त्यसैले तँलाई फोन गरेको हो। साथी डाक्टर भएको केही फाइदा त हुनुपर्‍यो नि,' ऊ प्रसंग जोड्दै छ।
फाइदा घाटा नभन् न यार! मैले सकेसम्म, मलाई आएजति तँलाई सहयोग गर्ने हो- यति बोलेर म चुप लाग्छु र उसलाई आफ्नो कुरा राख्ने पालो दिन्छु।
'यार, बिहे भयो। माया गर्ने श्रीमती छ। भर्खरै बच्चा पनि भयो। जागिर पनि ठिकठाकै चल्दैछ तर म खुसी छैन। जिन्दगीमा किन किन कस्तो खालीपन महसुस हुन्छ,' ऊ एक सासमा वाक्य सक्छ।
'राति त एक पेग नखाइ निद्रा आउँदैन मलाई, तँलाई के ढाँट्नु,' उ फ्याट्ट जवाफ दिन्छ।
मित्र, ढाँट्नु त हुँदै भएन नि! जिन्दगीमा तीन जनालाई नढाँट्नु रे- म यताबाट कुराकानी हल्का बनाउने प्रयास गर्छु।
'को हुन् ती तीन जना?' ऊ उत्सुक भएर सोध्छ।
डाक्टर, वकिल र भेट भयो भने भगवान- म खरर उत्तर दिन्छु।
'ब्रो, मलाई डिप्रेसन भा'को हो त,' हाँसो रोकिनासाथ ऊ प्रश्न गर्छ।
हुन सक्छ ! एकचोटि मानसिक रोगका डाक्टरलाई भेट् न त- म आफ्नो कुरा राख्छु।
साथी उताबाट बोल्छ, 'मानसिकको डाक्टरलाई नै भेट्नु पर्ने हो र? डू आइ रियल्ली नीड सच हेल्प?'
अब हेर् तँलाई ज्वरो आयो भने डाक्टरलाई भेटेर रगत, पिसाब जँचाउन जान्छस् कि नाइँ? अहिले तेरो मन बिरामी परेजस्तो छ, एकचोटि गएर मनको डाक्टरलाई भेट्। तँलाई सजिलो हुन्छ- यसो भन्दै म उसलाई आफूले चिनेका एक-दुई जना मनका डाक्टरका बारेमा जानकारी दिन्छु।
ऊ सहमति जनाउँदै फोन राख्छ। फोन राख्दै गर्दा ऊ भन्छ, 'ब्रो, ढाँट्न नमिल्ने तीन जनाको लिस्टमा एकजना थप् है!'
मैले सोधेँ को हो त्यो चौथो व्यक्ति?
आफू वरिपरिका दस जना मानिसलाई सम्झिनुहोस्। ती दसमध्ये कम्तीमा चार जना कुनै न कुनै मानसिक समस्याले पीडित हुन सक्छन्। मानसिक रोगका क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न अध्ययनले यस्तै कहालीलाग्दो तथ्यांक अगाडि ल्याएको छ। अझ डरलाग्दो कुरा के भने, पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्या गर्नेको संख्या उलेख्य मात्रामा बढेको देखिएको छ। त्यस्तै मानसिक रोगका बिरामीले जति पीडा भोग्छन्, उनीहरूलाई हेरविचार गर्ने परिवारका सदस्यको दुखद भोगाइ र लाचारी साँच्चै कुन ढक तराजुले नाप्ने हो? कल्पनासम्म पनि गर्न गाह्रो छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञानमा एउटा शब्दावली निकै चर्चित छ जसलाई 'आइसवर्ग फेनेमेनेन' भनिन्छ। टाइटनिक सिनेमा हेर्नुभएको छ नि? त्यसमा जहाज महासागरबीच रहेको हिमशैलमा ठोक्किएर दुर्घटनामा पर्छ। हिमशैल समुद्रमाथिबाट जत्रो आकारको देखिन्छ, पानीमुनि त्यसको आकार सोचेभन्दा निकै विशाल हुन्छ। मानसिक रोगमा पनि यस्तै नियम लागू हुन्छ। जति देखिन्छ, त्योभन्दा समस्या निकै बढी हुन्छ र यसको फैलावट धेरै हुन्छ।
हरेक मानसिक रोगलाई 'बहुला' , पागल , 'दिमाग सट', 'साइको', 'हावा फुस्केको' मान्ने परिवेशबाट हुर्किँदै आएका हामी खुलेर आफ्नो मन बिरामी भएको भन्न डराउँछौं। परिवारमा कसैलाई यस्तो समस्या छ भने सक्दो लुकाउने प्रयासमा रहन्छौं। कुनै साथी अलि बिस्तारै काम गर्छ भने हामी उसलाई 'सुस्ते' भन्दिन्छौं। अलि बढी अतालिन्छ भने उसलाई उसको मुखैमा 'डरपोक' भन्दिन्छौं। ऊ कस्तो मनस्थितिबाट गुज्रेको छ? केलाउने फुर्सद कसैलाई हुँदैन।
साथी धेरै बोल्दैन, उदास बस्छ, घुलमिल गरिराखेको छैन भने हामीमध्ये कतिले उसलाई फोन गरेर वा भेटेर 'ओइ ठिक छस् नि, केही गाह्रो छ भने भन् है, म छु नि' भनेका छौं?
हामीमध्ये कतिका यस्ता साथी छन्? वा हामीमध्ये कति अर्को व्यक्तिका लागि यस्ता साथी बन्न सकेका छौं?
मानसिक रोग विभागको वार्डमा हरेक बिहान मनोचिकित्सकले बिरामीलाई सोध्ने एउटा प्रश्न छ- तपाईंको मन कस्तो छ?
उत्तर विभिन्न आउन सक्छ- आत्तिएको छ, डराएको छ, दुःखी छ, ठुस्स छ, दिक्क छ, रिसाएको छ, उदास छ, हतास छ, ठीक छ, शान्त छ...।
लाग्छ- भागदौड प्रतियोगिता चलिरहेको यो युगका हामी हरेक मानिसले बिहान बिछ्यौनामा आँखा खुल्नेबित्तिकै यो प्रश्न आफैंलाई सोध्नुपर्छ- मेरो मन कस्तो छ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १, २०७८, १६:२६:००